မန္တလေးက ကောင်မလေးကို V Day လက်ဆောင် ကိုယ်တိုင်သွားပေးခဲ့တဲ့ စိုင်းစိုင်း – Cele Channel
“Perfect Valentines Day!!!!!! ❣
Posted on February 10, 2018 Author Cele
သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေတစ်ယောက်ကတော့ မကြာသေးခင်က ဖြစ်ထားတဲ့ ကားအက်စီးဒင့်မှာ သူမရဲ့ကား ရစကာမရှိအောင် ဘော်ဒီတစ်ခုလုံး ရှေ့နောက် ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက် သိန်း ၁ဝဝ ကျော် ကုန်နိုင်ပေမယ့် ၃၅ သိန်းနဲ့ပဲ ကျေအေးပေးလိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။ ခင်နှင်းဝေရဲ့ကားကို နောက်က သဲကားက တိုက်ခဲ့မိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားပိုင်ရှင်က လှည့်မကြည့်တဲ့အတွက် ဒရိုင်ဘာမိသားစုက ၃၅ သိန်းပဲ တက်နိုင်တာကြောင့် ၃၅ သိန်းနဲ့ပဲ ကျေအေးလိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေတဲ့ အိမ်နဲ့နီးတဲ့ ဧရာဝဏ်လမ်းပေါ်မှာ ခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အက်စီးဒင့်က ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းခဲ့သော်လည်း ခိုင်နှုးဝေနဲ့အတူ ပါလာသူများ ဘာမှ ဒဏ်ရာမရခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေက ပရဟိတတွေ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေတဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သဲကားဆိုတော့ ပိုင်ရှင်ဘက်က သိမ်မလျော်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ ကားမောင်းတဲ့လူဘက်ကလည်း မိန်းမနဲ့ ကလေးနဲ့ပေါ့နော် […]
နာမည်လေးလုံးနဲ့ ရေစိမ်မင်းသမီးရဲ့ အချေခံလိုက်ရတဲ့ မေပန်းချီ
Posted on November 22, 2017 Author Cele
ဒိုင်ယာလော့ထဲမှာ မပါတဲ့ စာသားတွေကိုပါပြောလာတဲ့ မင်းသမီးရဲ့ စကားတွေက ငါးစိမ်းတန်းထဲရောက်သလို ခံစားလိုက်ရတယ်ဆိုပြီး မေပန်းချီက သူမရဲ့ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာမှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ‘ အနုပညာလုပ်ခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့တဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ……. ဇာတ်ဝင်ခန်းအရ ဒိုင်ယာလော့တွေကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်,,, ကိုယ်နဲ့တူတူပါဝင်သရုပ်ဆောင်တဲ့သူဘယ်သူဘဲဖြစ်ဖြစ် ကြီးသူဖြစ်စေ ငယ်သူဖြစ်စေ Sorry ဒါမှမဟုတ် ကန်တော့ပါနော်လို့ တောင်းပန်ပြီးမှရိုက်လေ့ရှိပါတယ် အခုကျတော့ ဒါရိုက်တာကလည်းအဲ့ဒိုင်ယာလော့ မသင်ထားဘူး ဇာတ်ဝင်ခန်းထဲမှာလဲမပါဘူး ပြောလိုက်တာ တလဆက် ဘယ်နားဘယ်လိုဝင်ပြီးပြောပြီး ,,, အိုက်တင်လုပ်ရမှန်းမသိ ပြောလိုက်တာလဲ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ရိုင်းစိုင်းလိုက်တာ မလိုအပ်တာတွေပါထည့်ပြောတယ် သူတောင်စား တွေရောဝက်မတွေပါမကျန်ငါးစိမ်းတန်းထဲရောက်သွားသလိုဘဲ ချေတာလဲချေပေါ့ညီမလေးရယ် ချစ်ဖို့ကောင်းအောင်ချေပါ အိုက်တင်ကောင်းတာထက်ရိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုအတပ်မခံရပါစေနဲ့ အမတို့ကအနုပညာ လုပ်ပိုင်ခွင့်က ဇာတ်ကားတစ်ကားမှာချပြခွင့်နည်းပါတယ် ရတဲ့အခွင့်ရေးကိုတော့အပြည့်အဝလုပ် ပါရစေ ညီမလေးကအောင်မြင်ပြီးသားပါ ညီမလေးနဲ့ယှဉ်ပြောပြိုင်ပြောရင်လဲ အစ်မတို့ပဲ လူမုန်းများမှာပေါ့ ညီမလေးရယ် ဘယ်လိုလုပ်ယှဉ်နိူင်မှာလဲ အစ်မတို့လဲပြောတတ်ပါတယ် ဒါမဲ့မရိုင်းပါရစေနဲ့ အစ်မတို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူးလေ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ […]
ကိုရီးယားအိုင်ဒေါတွေရဲ့ မျက်နှာအသားအရေကို အနီးကပ်ရိုက်ထားသော ဓါတ်ပုံများထွက်ပေါ်လာ
ဒီကနေ့မှာတော့ Dispatch သတင်းဌာနကနေ ကိုရီးယားအိုင်ဒေါမလေးတွေရဲ့ မျက်နာအသားအရေတွေကို အနီးကပ်ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ပရိသတ်တွေဆီ ချပြခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်သဘောကျရတဲ့ အိုင်ဒေါတွေရဲ့ မျက်နာအသားအရေတွေကို အနီးကပ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေမှာ သူတို့ရဲ့ အသားအရေတွေဘယ်လို ပုံစံဖြစ်နေလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော်။ 1. f(x) Krystal 2. Kim Tae Hee 3. Song Hye Kyo 4. Lee Young Ae 5. Kim Yuna 6. AOA Seolhyun 7. IU 8. Suzy Source: Koreaboo